थाहा खबर: 'उल्झन' लिएर आए हेमप्रभास
'उल्झन' लिएर आए हेमप्रभास
काठमाडौं : साहित्यकार हेमप्रभासको उपन्यास 'उल्झन' सार्वजनिक गरिएको छ। कविताबाट उपन्यास लेखनमा आएका हेमप्रभासको पहिलो उपन्यास 'उल्झन' को पत्रकार युवराज घिमिरे, अभिनेता राजेश हमाल, कवि एवं सञ्चारकर्मी डा. नवराज लम्साल, साहित्यकार महेश पौड्यालले पर्यटन बोर्डमा सार्वजनिक गरेका हुन्।
उपन्यासमा नेपालको दशक लामो जनयुद्धबाट प्रभावित युवाहरुको मानसिक अवस्था रहेको युवराज घिमिरेले बताए। उनले द्वन्द्वका कारण विस्थापित जन्माएका युवाहरुका कथा रहेको र तिनका नमरेका सपनाहरु रहेको घिमिरेको भनाइ छ।
अभिनेता राजेश हमालले हेमप्रभासको उपन्यास वर्तमान समाजको प्रतिविम्ब रहेको आफूले पाएको बताए। 'आफ्नो परिवेश र समाजप्रति संवेदनशील पाएको छु', उनले भने, 'उपन्यासमा आफ्नो परिवेश, आफूले भोगेको कालखण्डको यथार्थ चित्र प्रस्तुत गर्नुभएको छ।' नेपाली जनजीवनका विभिन्न कालखण्डलाई उपन्यासमा उतारिएको र मानव जीवनलाई अर्थ्याउने प्रयास गरिएको हमालको भनाइ छ।
उपन्यासमा शब्द भन्दा पनि संवेदना उतारिएको भनाइ थियो, कवि एवं पत्रकार डा. नवराज लम्सालको। उनले भने, 'उपन्यासमा मान्छेका कुरा गरिएको छ, माटोको कुरा गरिएको छ र देशको कुरा गरिएको छ।'
त्यस्तै समालोचक महेश पौड्यालले उपन्यासमा युवा पात्रहरुको मनोविज्ञान रहेको बताए। उनले भने, 'विगत एक दशकको नेपाली राजनीतिक द्वन्द्वले युवाहरुमा कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने उपन्यासमा रहेको छ।' उपन्यासमा ९ पटक आत्महत्या गर्न खोज्ने पात्रले अन्तिममा जीवन रोजेको घटनाले नेपाली युवाहरुको वर्तमानलाई संकेत गरेको पौड्यालले बताए। पुस्तक हरेक नेपालीको जीवनसँग मेल खाने उनले बताए।
लिपि बुक्सले प्रकाशित गरेको 'उल्झन'को मूल्य ३५० रहेको छ भने यसको पृष्ठ २ सय ८८ छ।